Uxolo MARBELLA, Kufuphi ne-UST,TechnoPark.Kazhakuttom
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguShiny
Wamkelekile kwi-Nest yethu entsha kraca kwaye uve umahluko.Sikuqinisekisa ngamava amnandi.Le iya kuba yindawo ekhululekileyo kubantu abasebenzela i-UST Global ixesha elifutshane.Kufuphi nje nase-UST Global,Infosys Techo Park Phase IIl, TCS, CET, Keltron industrial est.
Ngokunjalo nakwiintsapho ezikhetha ukuhlala ixesha elifutshane ngeHolide.Indawo yam yi-2BHK enoMoya/C ngokupheleleyo. Ingaphantsi kwe-5 Km ukusuka kwisibhedlele se-KIMS. Kuba ndihlala nosapho lwam kumgangatho ophantsi le propathi ifanelekile kakhulu kukuhlala amanenekazi.
"Ipropathi yam yi2BHK eneAir/C epheleleyo.Igumbi lokulala linebhedi ekhululekileyo.king size double,32" LCD TV, itafile yokunxiba, indawo yewodrophu ukuze uyisebenzise,indawo yokuhlambela encanyathiselweyo,imeko yomoya,Ifriji,Izixhobo zokuhlamba izitya ziyafumaneka - isepha, iitawuli, intlama yamazinyo, iphepha langasese Sibonelela ngogcino lwemihla ngemihla (ngesicelo).
Iitawuli ezintsha kunye nelinen ezicocekileyo zikhoyo.
4.94 · Izimvo eziyi-62
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi62
I-UST GLOBAL,INFOSYS,TECHNO PARK,TCS.Kufuphi neLULU Mall ezayo. I-Kariavattom sports Hub, iGreen Field stadium.Unokuba nencasa eyohlukeneyo yeentlobo ezahlukeneyo zokutya kwiihotele ezahlukeneyo kunye neendawo zokutyela ezikufuphi neKazhakuttom kunye neendawo zokutyela ezifumaneka lula ubusuku nemini.
Umbuki zindwendwe ngu- Shiny
Ndihlala kwipropathi ekumgangatho ophantsi nosapho lwam. Umyeni wam ngumamkeli-ndwendwe.Sobabini siyakuthanda ukudibana nabantu abatsha kunye nokusebenzisana nabo.Siza kuba khona ukuze samkele undwendwe kwaye sibancede kwaye senze ukuhlala kwabo kube ntofontofo.
Ndihlala kwipropathi ekumgangatho ophantsi nosapho lwam. Umyeni wam ngumamkeli-ndwendwe.Sobabini siyakuthanda ukudibana nabantu abatsha kunye nokusebenzisana nabo.Siza kuba khona u…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Thiruvananthapuram